Sadhana Sharma's Blog: February 2008
सपनीमा पनि सँधै आन्दोलन देख्छु अचेल
जब केही लेख्न खोज्छु अशान्ति नै लेख्छु अचेल
आतंक र दुश्मनी नै छाएको छ जताततै
शान्ती माग्दै आरतीले आफ्ना आँखा सेक्छु अचेल
विकास गर्छु भन्नेले नै विकास भाँच्न थालेका छन्
युवाहरुमाथि फेरि जाल नौले हालेका छन्
म त पासो पर्दिन नि, विचार गरि टेक्छु अचेल
तर जब लेख्न खोज्छु, अशान्ति नै लेख्छु अचेल
सत्तालोलुप नेताहरुले अब जातै फालेकाछन्
आगो बाली निर्दोषलाई आगा भित्र हालेकाछन्
बाटो हिंड्दा ढुङ्गा, ईंटा, लाठाहरु छेक्छु अचेल
त्यसैले त लेख्न खोज्दा अशान्ति नै लेख्छु अचेल
लेख्न खोज्दा सँधैभरि अशान्ति नै लेख्छु अचेल!!
Posted by Prakash Luetel at 9:22 AM Links to this post
दो दिल मिल रहें हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके
" दो दिल मिल रहें है, मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके........" टिभीमा यो गीत बजिरहेको थियो । गायकको स्वर सँगसँगै मिलाइ मिलाइ ठूलो स्वरमा मेरो भाइपनि गीत गाउँदै थियो । यो उसको सँधैको बानी थियो, तर मलाई भने खुब झर्को लागीरहेको थियो, उसको स्वर सुन्नपनि ! " कति हल्ला गरेको होला गधाले, यहाँ आफूलाई कस्तो टेन्सन भइरा'बेलामा! " मनमनै भाइलाई गाली गरें मैले । तर मुखले केही भनिन, मेरो मनको कुरा फेरि बा आमाले थाहपाउनुहोला भनेर, म चुप लागेर बसें ।
मैले सोचेकीपनि थिइन कहिल्यै, मेरो जिन्दगीमा पनि यो दिन आउला भनेर ! ब्याच्लर्स सम्म गरिसकेर जागिर पनि खानथाले पछि त झन् आफूलाई निकै परिपक्व ठान्थें म ! तर पनि थाहै नपाइ, एउटी सोह्र वर्षे किशोरीले झैं उसलाई आफ्नो सपना, कल्पनामा सजाउनपुगिसकेंछु !!!
उ अर्थात् रोशन मेरो टिमको म्यानेजर, मेरो बोश ! शुरु शुरु मा म उसलाई फुटेको आँखाले पनि देख्न सक्दिनथें । खुब काम लगाउँथ्यो मलाई ! " चेली ! तिम्रो Design Portion सकिन लाग्या छ हैन ! आज त्यो सकेर यो Data Analysis गरिदेउ न है , अलि Important छ यो ।" म अफिस पुग्ने बित्तिकै धेरै जसो यस्तै यस्तै भन्ने गर्थ्यो उ । "माइक्रो बस नपाएर, कति दु:खले हिड्दै आउँदैछु, आउने बित्तिकै काम लाउँछ ; खुब हाकिम भइखाको " यस्तै सोचेर मुर्मुरिन्थें म । तर बिस्तारै उसको मीठो बोली र सहयोगी भावनाले मेरो मनमा छाप छोड्न थाले । मैले गल्तीहरु गर्दा पनि उ कहिल्यै रिसाउँदैनथ्यो, सँधै राम्रो सँग सिकाउँथ्यो, कहिल्यै झर्कोफर्को गर्दैनथ्यो ।
"चेली ! तँ त क्या लक्की यार, रोशन सरको टिममा छेस्, त्यस्तो Soft, Understanding बोश पो पाउनु " साथीहरुले भन्ने गर्थे मलाई । हुन पनि हो, मेरा साथीहरु कहिल्यै टाइममा घर जान पाउँदैनथे । छुट्टिको दिन पनि आएर पेलिन्थे, मैले भने कहिले त्यस्तो पेलिनु परेको थिएन । यिनै सब कुराहरुले होला शायद, उ मलाइ राम्रो लाग्न थालेको थियो ।
एक हप्ता जस्तो अगाडि मात्र त हो, रक्षाले " तर हाम्रो रोशन सरको नाक अलि कार्टुन छ है " भनेपछि केटीहरु गललल हाँसेका थिए । त्यस बेला मलाई भने झनक्क रिस उठ्यो " नाक जस्तो भए नि के त, बानी बेहोरा मा उ जति राम्रो यो अफिसमा अर्को छैन क्यारे, फेरि केहि कार्टुन पनि छैन ल प्लीज ।" प्वाक्क बोलेंछु म । त्यति पाए पछि केटीहरुलाई के चाहियो, मलाई जिस्काउनथाले उनिहरु । म रिसाए जस्तो गरेर त्यहाँबाट हिंडें । मेरो मनमा त्यसबेला एउटा आँधि नै जस्तो चलिरहेको थियो,
आँधि खुशीको थियो, डरको थियो या अरुनै केहीको म भन्न सक्दिन तर त्यस्तो, मेरो मनमा पहिने कहिले भएको थिएन । कहाँ हिंड्दै थिएँ थाह छैन तर हिंड्दै थिएँ म अलि अलि होशमा अलि अलि बेहोशमा । अचानक केहीमा ठोक्किएँ म । " चेली ! यस्तो आत्तिएर कहाँ हिंडेकी तिमी, सन्चो छैन कि क्याहो?" उसको मीठो स्वरका वेभहरुले फेरि मेरो eardrum vibrate गराए । अनि पो झल्याँस्स भएँ म, निद्राबाट ब्युँझे जस्तै । "हैन केही छैन, I am so sorry, म सरसँग ठोक्किएँछु ।" यति भनेर दौडदै म आफ्नो सीटमा गएँ ।
त्यसदिन राति निकै सोचें मैले । रातभरि आफूले उसको लागि अनुभुत गरेका कुराहरुको जोड घटाउ गरे पछि एउटै निष्कर्श निस्कियो, उसलाई आफ्नो मनमन्दिरमा बसाइसकेको, र उसलाई हृदयदेखिनै माया गर्न थालेको कुरा मैले त्यसदिन बल्ल पो बुझें । तर आफ्नो मनमा चलेको आँधिलाई आफ्नै मनमा सिमीत गर्ने निर्णय मैले त्यसै दिन गरेकीथिएँ । उसका अगाडि आफ्नो प्रेम प्रस्तुत गरेर, बहिष्कृत हुन चाहन्नथें म।
फेरि म मध्यम वर्गिय, परम्परागत परिवारकी छोरी, हाम्रो परिवारमा प्रेम विवाह पचाइन्न । रोशनको कुरा बाआमा समक्ष राखेर उहाँहरुको म प्रतिको अपार स्नेह र विश्वास गुमाउन पनि चाहन्नथें । एकातिर मैले पहिलो पटक मनपराएको यस्तो मान्छे, जो मेरो बारे मा के सोच्छ भन्ने समेत मलाई थाह थिएन, अर्कातिर मेरा परिवारका तमाम शदस्यहरु ।
हिजोआज मेरा दिनहरु यस्तै ताना बाना बुन्नमा नै बित्छन् । एउटा अनौठो वातावरण छाइरहन्छ मानसपटलमा, न कसैसँग बोल्न मनलाग्छ, न केही रमाइला काम गर्न नै । अफिसमा हुन्जेल, रोशनको अघिपछि घुमिरहन मनलाग्छ, उसँग बोलिरहन मनलाग्छ, घर आएपछि भने कस्तो कस्तो हुन्छ, झर्को मात्र लाग्छ । त्यसैले आहिले भाइले गीत गाएको सुन्नपनि मलाई झर्को लागेको हो ।
" छोरी ! के गरेर बसेकी तँ यहाँ, हिजोआज बोलेको पनि देख्दिन, के भो ?" मेरो कोठाभित्र छिर्दै सोध्नुभो आमाले । " केही होइन, अफिसमा कामको अलि प्रेशर छ अहिले, अनि पढ्नु पनि छ त्यसको लागि अलि अलि त्यसैले" मैले आमातिर नहेरी जवाफ दिएँ । म उहाँसँग नजर मिलाउन चाहन्नथें । म मेरी आमाकालागि किताब जस्तै हुँ, मेरो आँखामा हेरेरै मनको कुरा चाल पाउनुहुन्छ आमा, त्यसैले म अन्तै फर्केर बसिरहें ।
"अब त ब्याच्लर लेभल पनि सकियो, मास्टर्स यहाँ गर्दिन भन्छेस्, आफ्नो खुट्टामा पनि उभिइहालिस्, बिहे गर्ने उमेर पनि भयो, तेरो के छ विचार ?"
म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ , आफ्ना मनका भावनालाई रोशनका अगाडि छताछुल्ल पोखिदिने हिम्मत नभएपनि, उ आशिन भएको मेरो मनमन्दिरको सिंहाशनमा अरु कसैलाई राख्ने पक्षमा म कदापि थिइन । मलाई के गरुँ के नगरुँ भयो ।
"के भो ? किन नबोलेकी ?" फेरि सोध्नुभो आमाले ।
"आमा.... म...... रोशन...... हुन त उसले मेरो बारे मा के सोचेको छ मलाई केही थाहछैन , न त मैले आफ्नो बारेमा नै उसलाई केही भनेकी छु, मेरो केही गल्ती छैन आमा, उसलाई मैले कहिले देखि मनपराउँनथालें, त्योपनि मलाई राम्रो थाह छैन, तर अहिले नै बिहे ?? "
मेरो गालामा एक झापड कस्ने हुनु भो आमाले झस्तो लागेकोथ्यो मलाई तर हान्नु भएन , शान्त हुँदै भन्नु भो - " हेर् नानी!! जीवन सुखी बनाउनु छ भने बिहे उसँग गरेको राम्रो, जसले आफूलाई माया गर्छ , तलाई केहि कर छैन, पढेकी, बुझ्ने छोरी जे ठिक लाग्छ गर तर भोली, एकजना आउँदैहुनुहुन्छ, तँलाई भेट्न, उहाँ आफ्नो छोराको बिहेको कुरा लिएर आउँदैहुनुहुन्छ, राम्ररी भेट् । निर्णय जे गरेपनि पछि गर्नु । "
के गर्ने के नगर्नेको रनभुल्लमा परें म । आमाले भनेको कुरा ठिकै पनि हो । म रोशनको एकतर्फि प्रेममा परेर मेरा बा आमाको शिर झुकाउन चाहन्न । मैले रोशनलाई मनपराउनु भनेको एउटा बालकले चन्द्रमालाई मनपराउनु जस्तै हो फेरि, रुप, शीप, योग्यता लगायतका तमाम कुराहरुमा उ म भन्दा धेरै माथि छ । यही सब सोचाइमा यो रात पनि बित्यो ।
पहिले पहिले कसैले "केटी हेर्ने" भनेर कुरा मात्र गर्यो भनेपनि, मेरो पारो तात्थ्यो, "पसल मा सजाएर राखेको गुडिया हो केटी ?" यस्तै भन्थें म, तर आज मौन छु म । कुनै कुरामा कसैसंग विद्रोह गर्ने क्षमता नभएजस्तै भएको छ मलाई, आफूलाई युद्धमा हारेर फर्केको सैनिक जस्तै मानिरहेकी छु म ।
आफ्नै कोठामा बसेर किताब हेरिरहेकी थिएं म, बाहिर को को मान्छे आएको, गफगाफ गरेको पनि सुनिरहेकीथिएं । मनमा एकतमासको ढ्याङ्ग्रो बजिरहेको थियो ।
"चेली, भित्र के गर्दैछ्यौ छोरी बाहिर आउ त । " अरु बेला तँ भनेपनि कोही मान्छे आएका बेला तिमी भन्नुहुन्थ्यो मेरा बाले ! म डराउँदै अझ भनुँ अलिअलि काम्दै बैठक कोठामा गएँ । नजर उठाएर कसैलाई हेर्ने सामर्थ्य थिएन मेरो, त्यहीपनि त्यहाँ बसेका दुई जना प्रौढ व्यक्तिहरुलाई नमस्ते गरें मैले ।
"खै छोरो पनि आइपुग्नु पर्ने हो, किन ढिलो गरेको हो " एकजना ले झ्यालबाट यसो बाहिर हेर्दै भने ।
"काठमाडौंको ट्राफिक जामले त होला नि हजुर, भनेका बेला मा को कहाँ नै पुग्न सकिन्छ र !" मेरा बाले भन्नुभो । कुरा ट्राफिक जाममैं बढ्यो, म भनें लुसुक्क आफ्ना कोठातिर भागें ।
"को होला त्यो मान्छे, कस्तो होला ? मैले उसैसंग बिहे गर्नु पर्यो भने कसरी, के गर्ने होला ? म त रोशनलाई माया गर्छु नि, जिन्दगी अर्कैसंग कसरी बिताउने !!" भावनाका यस्तै तानाबाना फेरि बुन्न थालें म । बेकार मा त्यो अफिसमा जब पाएँछु, नपाएको भए नि हुन्थ्यो नि, हेत्तेरिका, " Love Stories only exist in reel life, not in real life" भन्ने मैले आफैं आज यो के दिन देख्नु परेको हो .......
"हजुर यहि हो उसको कोठा " मेरो भाइको आवाज सुनें मैले । लौ न !! कसलाई हो मेरै कोठामा पो ल्यायो जस्तो छ, नभन्दै मेरो ढोकाबाट "टक टक " को आवाज आयो । बोझिलो मन लिएर, रसाएका आँखा पुछ्दै, ढोका खोलें मैले ।
झसँग भएँ म, मेरा नेत्र विश्फारित भए किनकि मेरो अगाडि रोशन उभिएको थियो ।
"हेर न! आउँदा आउँदै ढिलो भयो, बुवा काकासँग त परिचय गरिसक्यौ रे होइन ?" अवाक् भएकी थिएँ म, उ आफ्नै शैलीमा बोल्दै थियो ।
"पहिले नै तिमीलाई सोध्नु भन्दा आमाबुवा मार्फत कुरा गर्नु नै ठिक होला जस्तो लाग्यो मलाई त, साँच्चै भन्दा तिमीलाई सोध्ने मौकापनि मिलेको थिएन; तर पनि अन्तिम निर्णय त तिम्रै हुनेछ, भन न, के तिमी मसँग बिहे गर्छ्यौ ? सहयात्री बन्छ्यौ मेरो जीवन यात्राको ? "
कति सजिलैसँग बोल्यो उ, म भने बोल्न सक्ने स्थितिमा नै छैन । मेरा आँखाबाट बाहिर झर्न आँशुका थोपाहरु तँछाड मछाड गर्दैछन् , खुशीका आँशु, जीवनमा कहिले अनुभुत नगरेको मीठो अनुभुतिका आँशु । म मेरो रोशनलाई निर्निमेष हेरिरहेकी छु, अनन्त अनन्त सम्म यत्तिकै हेरिरहन चाहन्छु पनि । अनि पर कतैबाट फेरि यो गीत बजिरहे झैं भएको छ - " दो दिल मिल रहें हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर चुपके चुपके ........"
!!! समाप्त !!!!
Posted by Sadhana Sharma at 5:59 PM Links to this post
उन्ले जस्तै तिम्ले माया लुकाउने त हौली
पुरानो त्यो घाउ फेरि दुखाउने त हौली ।
मेरो जोवन केवल तिम्रो सम्हाल है भन्दै
वचन दिई आफैलाई चुकाउने त हौली ।
तिमी विना जीउन म सक्दिन है भन्दै
आफ्नो शीर अरु सामु झुकाउने त हौली ।
विश्वाशको गमलामा मायाको फुल रोप्दै
डोरी चुर्डाई खसालेर फुटाउने त हौली ।
जिन्दगी भर नछुटिने वाचा गर्दा गर्दै
बाधिंएको गाठो फेरि फुकाउने त हौली ।
दोबाटोमा कोही अरु मुस्काइ दिए भने
यो टुटेको मुटु फेरि टुटाउने त हौली ।
- सुमन घिमिरे
सौराहा, चितवन, हाल डब्लिन, आयरल्याण्ड
Posted by Suman at 6:11 AM Links to this post
D2 मा बिताएका जिन्दगीका केही दिन, सिकेका धेरै कुरा, अनि कमाएका थुप्रै साथीहरु
" यहाँ हेर त, D2 ले Vacancy Announce गरेको रहेछ, Apply गर्ने होइन ?" क्यान्टिनमा पवित्रा र म बसिरहेका बेलामा पवनले आएर सोध्यो । "Apply!!! आहिले? पहिले Fourth year त सकौं न, अहिले नै हामीलाई कसले Job दिन्छ र?" उसलाई नपत्याउँदै हाँस्दै भनें मैले । "Apply गर्दैमा के बिग्रन्छ र? गरुँ न " उसले भन्यो, अनि त्यही दिन, हामीले D2 मा Apply गर्यौं । साथीले भनिहाल्यो गरिदिउँ न त, भनेर मात्र मैले गरकी थिएँ त्यो Apply , त्यहाँबाट आफूलाई बोलाउने विश्वास भने अलिकति पनि थिएन मलाई । त्यसको दुई तीन हप्ता पछि होला, त्यहाँबाट फोन आयो, Exam दिनको लागी बोलाइएको थियो । म छक्क परें, त्यहाँबाट त्यसरी बोलाउलान् भन्ने त मैले सोचेकीपनि थिइन । ख्याल ख्यालमैं जाँचपनि दिएँ, र त्यो जाँचमा म पास पनि भएँ । पहिलो इन्टरभ्यु सकिउन्जेल सम्ममा म दुई पटक D2 मा गइसकेकीथिएँ । त्यहाँको वातावरणले नजानिंदो किसिमले निकै आकर्षित बनाईसकेको थियो मलाई, त्यतिन्जेलमा D2HawkEyeServices परिवार को एउटा सदस्य हुने सपना मेरो आँखाभरि बसिसकेको थियो । अनि मैले त्यहाँ, Trainee बन्ने मौका पनि पाएँ ।
जिन्दगी निकै रमाइलो थियो त्यहाँ, १६ जना साथीहरुको ठूलो समूह, सहयोगी भावना भएका दाइ-दिदीहरु अनि राम्रो वातावरणपनि । Trainee period, सोचे भन्दा र भने भन्दा निकै लम्बिरहेको देखेर दिक्क पनि लागेको थियो एउटा समयमा, तर पनि त्यहाँको वातावरण र साथिहरुको साथले हौसला भनें दिइरहन्थ्यो । शुरुमा Data अनि Engine Department मा बसेर, प्रकाश दाइ, बिनय दाइ, प्रशान्त दाइ, मनिष दाइ अनि मनिन्द्र दाइबाट मैले धेरै धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ ।
आज म त्यो वातावरणबाट निकै टाढा छु, तर पनि, Database management का कुराहरु पढ्दा मलाई त्यहाँ सिकेका कुराहरु झल्झली याद आउँछन् , त्यसले गरेर पढ्नमापनि निकै सजिलो भएको छ । त्यहाँ भेटेका साथीहरुको त झन् के कुरा गर्नु, बिर्सने त प्रश्नै आउँदैन म उनीहरुलाई हरपल सम्झिरहन्छु । म बिर्सन सक्दिन सीताका प्रश्नहरुलाई, भद्र नताशालाई, मिलनसार मोनिकालाई, गफाडि सन्जितलाई, मीठो कुरा खाँदापनि मुख बिगार्दै खाने सन्तोषलाई, सबैलाई थर्काउने रोजालाई, चुपचाप बस्ने श्वेतालाई अनि पिउसलाई, (सुदीप)२ लाई, रघुलाई, निरोजलाई, सुरेसलाई, उज्जवललाई, अमितालाई, यी सबै सबै साथीहरुलाई । जुन साथीको कारणले D2 मेरो आँखाभरि सपना बनेर बस्यो, आज उ पनि त्यहीं छ, तर म त्यहाँ छैन ।
Engine Department मा मनिष दाइ र मनिन्द्र दाइको बीचमा बसेर काम गर्नुको रमाइलोलाई म कहिले पो भुन्न सक्छु होला र !! फेरि पनि जिन्दगीमा त्यस्तै वातावरणमा, त्यस्तै सहयोगी मिलनसार सहकर्मीहरुका माझ बसेर काम गर्न पाइएला, नपाइएला, भविष्यमैं थाह होला, तर D2 मा बिताएका मेरा थोरै दिनहरुलाई, सिकेका धेरै कुराहरुलाई अनि कमाएका अनमोल निधि, मेरा साथीहरुलाई, म जिन्दगीमा सँधै सँधै सम्झिरहने छु ।
Posted by Sadhana Sharma at 6:57 AM Links to this post
बादलको बदलिंदो बुट्टा जस्तो लाग्छ
अरु मानिसको भन्दा छुट्टा जस्तो लाग्छ
कस्तो कस्तो मेरो जीवन व्यथा बन्ने हो की
कहिले लाग्छ एउटा सुखद कथा बन्ने हो की
कुनै बेला पोल्टा भरि जूनतारा देख्छु
कहिले फेरि निराशाका गीत म नै लेख्छु
डरै लाग्छ मेरो जीवन त्यसै बित्ने हो की
मैले नै पो जिन्दगीको समर जित्ने हो की
मैले नै पो जिन्दगीको समर जित्ने हो की ॥
Posted by Sadhana Sharma at 7:48 AM Links to this post
दो दिल मिल रहें हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही ह...
D2 मा बिताएका जिन्दगीका केही दिन, सिकेका धेरै कुरा...